E nwere ọnụ ọgụgụ nke artists na Canada sitere na site guitarists, songwriters, pianists, egwú na drumists. Ha niile na-eme ihe ọ na-ewe na-emepụta music, ọ ga-abụ jijiji, Jazz, reggae, pop na hip-iwuli elu. Na-akpali akpali mmetụta nke music bụ mgbe Bilie a ịkwụsịlata na-atụrụ ndụ mmetụta na-ege ntị. Karịsịa ihe nile, e nwere mkpa ozi na-gafere ka ụmụ amaala na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, okpukpe na omume na-akụzi. Canada sokwa; e nwere nnọọ ọtụtụ artists na Canada, Otú ọ dị isiokwu a ga na-agbalị ka a mata na top 20.
1. Leonard nchụàjà
12.The mwute Hip
Download free music na TunesGo si net
Ọ na-otuto ọtụtụ n'ime ya Fans dị ka ihe "unparalled masterpiece nke song ede". Onye na-ese a mụrụ na 1934, Westmount, Quebec, Canada. Ọ bụ ma a na-akụ egwú na songwriter na ya songs dabeere na okpukpe, ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okike. Onye na-ese natara a 'Princess nke Australia Award' n'afọ 2011. Ọ na-ọma mara ndị na-esonụ Hits:
Joni Mitchell a mụrụ na 1956 na bụ Canadian na-agụ egwú, song edemede na onye na-ese bụ onye na-maara nke ọma maka ya pụtara ìhè nkà ọrụ. Ụfọdụ n'ime ya na-ewu ewu songs bụ; "Big Yellow tagzi" na Woodstock ". Na omenka impacted ọzọ ibe artists ghaghị. O meriri Grammy awards ya song ka ndị kasị mma Ndiife arụmọrụ.
3. Neil na-eto eto
Neil na-eto eto a mụrụ na November 1945 na Toronto Canada. Ọ bụ na-akụ egwú, songwriter na entrepreneur. The Rock na Roll Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha akọwa ya dị ka "otu n'ime oké nkume na-apụta kasị ukwuu songwriters na performers". Ọ maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Owuwe ihe ubi ọnwa
Oscar Peterson bụ a Canadian Jazz pianist na a andiwet. A mụrụ ya na 15 august 1925. Ọ na-echeta na-akwanyere ùgwù n'ihi Jazz music ka ọ tọhapụrụ n'elu 200 Jazz E, ndibọhọ 8 Grammy awards na ndị ọzọ na ọtụtụ enọ na na ukpono. Otu n'ime ndị ọzọ awards o meriri na-agụnye: Juno Awards na Gọvanọ General si Ịrụ Award. Ọ maara nke ọma na-esonụ Hits:
Ị na-aga isi m.
Stompin Tom Connors bụ a na-agụ egwú, songwriter na a guitarist. Ọ na-atụle ihe akara ngosi n'etiti ndị ya Canadian Fans. A mụrụ ya na 9 February 1936 na họọrọ music dị ka ọrụ ya na ya songs e hiwere Canadian ụmụ amaala na ebe. Ọ ndibọhọ isii Juno Awards, natara ndụ oge nweta na e mekwara otu onye uweojii nke iji nke Canada. Ọ bụ ma ama n'ihi ndị na-esonụ songs:
Bud na spud
Mụrụ June 20, 1945, Ann Murray bụ a Canadian na-agụ egwú na pop music na okenye music. The musician malitere ewu ya music ọrụ site na-eduzi na pop ụda. Ọ dere kasị ukwuu ịga nke ọma kemgbe na ọtụtụ n'ime ya music ịbụ n'elu nke chaatị na a ọtụtụ mba. Ọ bụ ma ama maka ndị na-esonụ ikwọ:
Ị mkpa m
Danny si song
Enwere m ike ịgba egwu a
Arcade Fire bụ a Canadian Indie oké nkume mmachi dabere na Montreal na mejupụtara 6 òtù. Tọrọ ntọala na 2001, ọ ghọrọ ma ama na 2004 na ntọhapụ nke ha album olili ozu. Ọ ndibọhọ 2 awards gụnyere 2011 Grammy maka album nke afọ na 2011 Juno award maka album nke afọ. The gbalaga bụ ma ama n'ihi ndị na-esonụ ikwọ:
My ahụ bụ a onu
Okpueze nke Ịhụnanya
Na ala ịta ahịhịa
Sarah Mclachlan a mụrụ ya na January 28, 1968, na Halifax Nova Scotia, Canada. Ọ bụ a Ndiife-Pop-agụ egwú na song edemede. Ọ na-maara nke ọma maka ya na-akpali akpali music ma na Canada na mba. Ya music ọrụ malitere na mmetụta dị nro afọ anọ na ya na ịhụnanya maka music hụrụ ya na-ọma. Ọ maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
M ga-echeta gị
Mụrụ June 1, 1974, Alanis Morissette bụ a Canadian- American nkume-agụ egwú, guitarist, ndekọ emeputa ihe na-eme ihe nkiri. Ọ ndibọhọ 16 Juno kwuo, asaa Grammy enọ na na e nominated maka abụọ Golden Globe enọ. Ọ bụ ma ama n'ihi ndị na-esonụ ikwọ:
Ị oughta mara
Bryan Adams 'music aga n'ihu na-elu nke oké nkume music chaatị na Canada dị otú ahụ na Hits dị ka "-agba ọsọ ka Ị," "Summer nke '69," na "he Dị ka a Knife," Ọ mụrụ ya na November 5,1959 o natara ọtụtụ awards nke na-agụnye: 20 Juno Awards, 15 Grammy awards, TV na ASCAP, American music enọ. Ọ bụ ma ama maka ndị na-esonụ Hits:
M na-eme ya n'ihi na ị
Anọ m ebe a
Nke a bụ a Canadian oké nkume mmachi na mejupụtara anọ artists. The barenaked ladies guzobere 1988 dị ka a duo nke Robertson na Stephen nke mechara na-eto n'ime a gbalaga nke anọ. Ruru ka ìgwè ndị agha pụtara ìhè arụmọrụ ya, e nominated maka a abụọ Grammy awards ke 2001. Ha na-ọma mara ndị na-esonụ Hits:
Big Bang tiori isiokwu
12. The mwute Hip
Nke a Canadian oké nkume mmachi mejupụtara Gordon Downie, Paul Lanlois na Rob Baker. Ha kpụrụ ìgwè ahụ dị na 1983 na kemgbe, ha nwere tọhapụrụ a ọnụ ọgụgụ nke songs na ọba na ahụwo ha na-ere si arena-sized concerts Na Canada n'agbanyeghị bụghị ịga nke ọma na topping na music chaatị dị iche iche. Ha na-ọma mara ndị na-esonụ Hits:
New Orleans na-emikpu
N'ihu site a narị afọ.
Bedouin soundclash bụ a Canadian gbalaga nke e hiwere na 2001 na mejupụtara atọ artists. The gbalaga bụ renown na Canada n'ihi na ya pụtara ìhè arụmọrụ na na 2007 ha otu 'abụrụ Andrews' ghọrọ mba. 1 on isi nkume ojii EDGE 102 si n'elu 30 ngụda. The gbalaga a maara nke ọma na ndị na-esonụ Hits:
Obi ọjọọ obi
Blue Rodeo bụ a Canadian mba oké nkume mmachi guzobere 1984 na Toronto. Ọ mejupụtara 7 òtù na ha nwere 13 zuru ogologo releases tinyere otutu solo albums. The gbalaga rụrụ Wezuga ọma na ha itinye n'ọkwa ka Canadian Music Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha n'oge Juno Awards nke 2012 na-enweta ụfọdụ renown. Ha na-ọma mara ndị na-esonụ Hits:
Ọ bụghị kụrụ m ma
5 ụbọchị na May.
Guzobere 1993, Billy Talent bụ a Canadian Punk oké nkume mmachi na adị ihe karịrị afọ iri tupu a mainstream ịga nke ọma. The gbalaga mejupụtara 4 òtù na ebe ọ bụ na 2001, o mere ka 2 platinum ndia na Canada. The gbalaga bụ ugbu a ma ama n'ihi na ndị na-esonụ songs:
Rusted si mmiri ozuzo
Ihe ọ bụla na atọpụ
Broken Social Scene bụ a Canadian Indie gbalaga guzobere 1999 site Kelvin sere ma Brendan Canning. Na 2002 ha wepụtara album-ị chefuru ya na ndị mmadụ na ndibọhọ ọzọ album nke afọ Juno award na 2003. Ha na-ọma mara ndị na-esonụ Hits:
Mme gbụọ ya ọnụ mmiri.
Mụrụ na 1951 na Toronto, Michael Brook bụ a Canadian guitarist, mmewe, na-emeputa na music andiwet. Ọ bụ ma ama n'ihi ya egwu arụmọrụ na ọ nọ na-nominated maka a Germany award na 1996 maka ya mmepụta ọrụ nakwa ndibọhọ ASCAP awards na 2011. Ọ bụ ma ama n'ihi ndị na-esonụ ikwọ:
Charlie ikpeazụ akwụkwọ ozi.
Best sị na i kwughị
A mụrụ ya na September 1975, Michael Buble bụ Canadian na-agụ egwú, song edemede na ihe omee. O meriwo ọtụtụ awards gụnyere anọ Grammy enọ na na multiple Juno enọ. Ọ bụ ma ama n'ihi ndị na-esonụ ikwọ:
Zutere na ị ma.
Chilliwack bụ a Canadian nkume gbalaga nke bụ ifịk ke oge n'etiti 1979-1997. Ha rụrụ 40 kpọrọ na na na-ukwuu na-eme ememe ụbọchị, ma na-echeta ha isii nnukwu songs: m girl, m kweere, whatcha agbarapụ otú, ofufe n'abalị, crazy okwu na lonesome Mary.
20. City Ìhè
City Ìhè bụ ihe American oké nkume mmachi si Ohio na e guzobere na 2008. O nwere isii òtù na were n'etiti 2008- 2014. Ha wepụtara 2 albums na asatọ kpọrọ na na-eme ememe ụbọchị. The gbalaga bụ ma ama n'ihi ndị na-esonụ hit songs:
Oyi ma chaa isi awọ
M arịa ọrịa nke na ọ
Hụ na ị na top
> Resource> Music> Top 20 Canadian Artists